Ukucushwa kwe-Arch Linux Basic | Kusuka kuLinux
Ukucushwa kwe-Arch Linux Basic
U-Alejandro Ponce | | I-GNU / Linux, Kunconyiwe, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ngaphambilini, sifaka XORG nezinsiza zayo ezilungele ukusetshenziswa, kepha kukithi ukuthi silungiselele imininingwane emincane embalwa ukuze ibe ngcono kakhulu.
Lo mhlahlandlela ugxila kakhulu ku XORG, yize kusisiza futhi ukuthi sibe nokumisa eziyisisekelo wohlelo lwethu.
Lo mhlahlandlela ulusizo kakhulu ezindaweni ezikhanyayo ezifana ne- I-Openbox, Awesome, I-DWM, Njll
Ezinye izinyathelo kulo mhlahlandlela cha ayadingeka uma ufuna ukufaka indawo elungiselelwe ngaphambilini (I-Gnome, KDE, Isinamoni, i-XFCE, Njll) Njengoba lezi zindawo zilungiselelwe ngokuzenzakalela, ungeqa izinyathelo nge- «*«, Yize banconywa uma ufuna ukuba nohlelo oluyisisekelo olungiselelwe.
p isitayela = »ukuqondanisa umbhalo: cacisa»>
Ngincoma ukuthi wenze lo mhlahlandlela ngemvelo eyisisekelo yokuqhafaza (i-twm) esikufake phambilini, ngoba sizodinga ukubhala ukucushwa (okunye kukude) nangaphakathi i-twm Singakopisha futhi sinamathisele esikhumulweni se-Xterm (kusobala ukuthi sidinga isiphequluli ukufinyelela lo mhlahlandlela kusuka ku-Arch Linux yethu, uma isiphequluli osithandayo sifakiwe sifaka lo mhlahlandlela, sikopishe futhi sinamathisele imiyalo).
Ukuqala imvelo yokuqhafaza: $ ukuqala
Ukunamathisela umbhalo wesiqondisi ku-Xterm: Shift + Faka
1 Setha ikhibhodi distro ku-XORG
2 Khiqiza amafolda akho
3 Faka izinqolobane zezingane
4 Ukufakwa kwe-Yaourt
5 Ukufakwa kwePulseaudio
6 Ukwesekwa kwekhiye yevolumu *
7 Ukusekelwa kwesaziso *
8 Ukufakwa Kwefonti Okunconyiwe
Setha ikhibhodi distro ku-XORG
Phambilini besisibekela uhlelo, manje alitholakali ngemvelo eyisisekelo yalokhu sakha ifayela lokumiswa kwekhibhodi.
$ sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.conf
Ngaphakathi kwefayela esilingezayo:
Faka: es o latam, ngokuya nge-distro yethu yekhibhodi.
Awazi ukuthi iyiphi ikhibhodi yakho yekhibhodi? (Chofoza igama lama-distros ngenhla).
• Isibonelo: la-latin1
kwesigaba Isikhombi se- "InputClass"uhlelo-ikhibhodi"MatchIsKeyboard" ivuliwe "
Option "XkbLayout"  "latam"
Option "XkbVariant" "deadtilde, dvorak"
Option "XkbOptions" "grp: alt_shift_toggle"
Manje ikhibhodi yethu ilungiselelwe kusistimu yethu.
Khiqiza amafolda akho
Lesi sinyathelo cha Kumele kwenziwe ngabasebenzisi abazofaka iGnome, ngoba bakhiqizwa ngokuzenzakalela.
Manje ngamafolda ethu ayisisekelo (Ideskithophu, Ukulanda, Umculo, Njll).
Kulokhu sifaka ithuluzi xdg-user-dirs:
$ sudo pacman -S xdg-umsebenzisi-dirs
Ekugcineni siyisebenzisa ukuze ikhiqize amafolda ethu.
Faka izinqolobane zezingane
Sivula ifayela /etc/pacman.conf
Uma ufake i-Arch Linux 64-bit (x86_64), kunconywa ukuthi unike amandla okugcina, ukuze ukwazi ukusebenzisa izinhlelo ezingama-32-bit (i686). Ukuyinika amandla sisusa "#" kwasekuqaleni.
Faka i- = /etc/pacman.d/mirrorlist
Kuyadingeka ukufaka i-yaourt, amaphakheji we-Virtualbox phakathi kwabanye.
Silifaka ekugcineni kwefayela lethu
I-SigLevel = I-never Server = http://repo.archlinux.fr/$arch
Ekugcineni sivuselela amakhosombe:
$ sudo pacman -Yebo
Ithuluzi elinikelwe umphakathi ngohlelo lwethu, umsebenzi wawo ukufaka ukufinyelela okuhlanganisiwe endaweni yokugcina izinto ye-AUR, evumela ukuzenzakalela kokuhlanganiswa kwamaphakeji kanye nokufakwa kwama-PKGBUILD akhethiwe ngaphakathi kwe-AUR.
I-Yaourt inweba amandla nokulula kwe-pacman, ingeza izici ezisebenziseka kakhulu futhi inikeze okukhiphayo okuhle nokunemibala, izindlela zokucinga ezibandakanyayo, nokunye okuningi.
$ sudo pacman -Iyourt
ISU: Ukuvuselela lonke uhlelo (kufaka phakathi amaphakheji afakwe kusuka ku-AUR):
$ yogurt -Syua
Akunasidingo sokukhuluma ngalokhu, ngoba kuyiphakheji ejwayelekile futhi ifakwe ngaphambilini kuma-distros amaningi we-Gnu / Linux, ukuze kube nokulawulwa komsindo ohlelweni lwethu, okulula kunalokho okunikezwe yi-ALSA.
$ sudo pacman -S I-pulseaudio pulseaudio-alsa
Ukusekelwa kokhiye wevolumu *
Ngokuvamile, okhiye bokulawula ukukhanya balungiselelwe ngokuzenzakalela ngakho-ke asidingi ukwengeza ukusekelwa (kwemishini engasebenzi okhiye bokukhanya ekugcineni komhlahlandlela kunesinyathelo sesikhashana), esikhundleni sokhiye bevolumu uma kufanele sikwenze. Kulokhu sifaka amathuluzi I-Xbindkeys y Pamixer .
Siqhubeka ukufaka i-Xbindkeys.
$ sudo pacman -S xbindkeys
IPamixer iyatholakala ku-AUR, ukuyifaka sidinga i-yogurt.
$ yogurt -S pamixer-git
Sakha ifayela lokumisa
$ nano ~ / .xbindkeysrc
# ivolumu phezulu
"pamixer --kwandisa 3"XF86AudioPhakamisaivolumu
# ivolumu ephansi
"pamixer - ukwehla 3"XF86AudioOkuphansiivolumu
Sigcina izinguquko futhi siphume nano.
Ekugcineni, siyengeza I-Xbindkeys ohlwini lwethu lwezinhlelo zokuqalisa (.xinitrc).
Sakha ifayela lethu le-.xititrc:
$ nano umabhebhana
Ngaphakathi kwefayela lethu, sifaka ekugcineni:
Ukusekelwa kwesaziso *
Siyafaka Yazisa-osd kusuka ezinqolobaneni ezisemthethweni.
$ sudo pacman -Sazise-osd
Uhlobo olushintshiwe luyatholakala kusuka ku-AUR ngokwezifiso.
$ yogurt -S yazisa-osd-ngokwezifiso notifyconf
Manje sihlola izaziso
$ yazisa-send "Sawubona Mhlaba"
Sesivele sifakiwe Yazisa-osd ohlelweni lwethu.
Esinye isazisi esisebenzayo nesinconyiwe sithi I-Xfce4-notifydIbuye ihambisane nezinye izindawo zemidwebo.
$ sudo pacman -S xfce4-yazisad
Ukufakwa Kwefonti Okunconyiwe
Sifaka amafonti ayisisekelo ohlelweni lwethu
$ sudo pacman -S ttf-inkululeko ttf-bitstream-vera ttf-dejavu ttf-droid ttf-freefont
Ekugcineni sifaka iphakethe lefonti elincane.
$ sudo pacman Amafonti we-artwiz-fonts
Ngalokhu siqeda ukusetha okuyisisekelo kwe-Arch Linux!
Ngemuva kokusetha XORG, uhlelo lwethu manje selulungele ukufakwa kwanoma iyiphi indawo yokuqhafaza.
Ukufakwa kwe- I-Gnome ku-Arch Linux.
Ukufakwa kwe- KDE ku-Arch Linux.
Ukufakwa kwe- Xfce ku-Arch Linux.
Ukufakwa kwe- I-Cinnamon ku-Arch Linux.
Ukufakwa kwe- I-Openbox ku-Arch Linux.
Ngiyacela! thumela ifayela lakho le- izinkinga / ukungabaza ku-imeyili yami: arch-blog@riseup.net
Sisize ngokuchofoza okukodwa!, yabelana nomhlahlandlela nabangani bakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ukucushwa kwe-Arch Linux Basic
Amazwana ayi-54, shiya okwakho
Umlingo wePuddy kusho
Lapho ngishiya i-10 yakho, okuthunyelwe okuhle, i-taringuero xpert
Phendula kuPuddy Magic
Ngicabanga ukuthi ngaduka, saqala nini ukuba nguTaringa? 😀
U-Alejandro Ponce kusho
Ngiyabonga kakhulu, ngigcine nginyukile ezinhlwini ee
Phendula u-Alejandro Ponce
Umhlahlandlela omuhle. Ngiyethemba ukuthi kungekudala kuzoba nokuningi ngezindawo, ngoba ngisebenzisa ama-elementaryOS ngontanga kodwa angibuthandi Ubuntu. Ngifisa ukuthi ngibe nayo ku-Arch.
I-Redundant, lolu lwazi luku-ArchLinux wiki futhi luthuthukiswe kangcono kakhulu. Isinyathelo ngasinye ngokuvamile sichaza ukuthi senzani nokuthi kungani, senza umsebenzisi afunde kule nqubo. Ngicabanga ukuthi lapho uphinda imininingwane kufanele ungeze ngaphezu kwezimpawu ezinhle nje.
Ngicabanga ukuthi kufanele ukhombise inhlonipho eyengeziwe ngomsebenzi owenziwe abanye. Okungenani wayezikhathaza ngokubeka izimpawu ezincane ezinhle. Yini oyenzile ngaphandle kokugxeka?
Ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi i-Arch Wiki iyadida, ukuba nesifundo esinjengaleso ngaso sonke isikhathi kuyaziswa.
Kuliqiniso, kuthuthukiswe kangcono kepha kubasebenzisi abaphambili. Umuntu osondelene nabasebenzisi abasha uzofaka noma aguqule lolu lwazi alushintshe lube sezingeni lalaba basebenzisi abasha, yingakho kungumsebenzi odingekayo ngaphezu kokuncomeka. Ngokuqondene namaphosta amancane amahle, kuyindlela yokuhlela nokwethula imininingwane, okwenza kube lula ukufunda nokujabulisa kakhudlwana.
Ekugcineni, ngifuna ukungeza ukuthi ukugxekwa kuhle inqobo nje uma kwakha. Ngeshwa okwakho akunjalo.
Umsebenzi omuhle kakhulu Alejandro 😉
Ngijabule kakhulu ukuthi abasebenzisi bayakwazi ukuthatha lokho engikuletha eminikelweni yami (ngale kolwazi), benza imibono yabo ibe yindlela efanele yokubonga.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho, imikhonzo.
Kulula ukugxeka. Ngithanda "amaphosta amancane amahle" anikeza ukuthinta okungaphansi kobuchwepheshe kune-wiki.
I-Arch wiki ingeyabasebenzisi abaphambili, ngithola lo mhlahlandlela uphelele. yize inobungani nomuntu ofayo olula futhi iqondiswe ikakhulukazi kuzipikha zaseSpain.
Ungakhubeki kepha lo mhlahlandlela awuchazi abancane ngalokho okwenziwayo.
Isb. Yenza general ukuthi izilawuli zevolumu zidinga i-Xbindkeys nePamixer. Leli iphutha elibi kakhulu elizodida umsebenzisi omusha futhi / noma libangele iphutha.
Esinye isibonelo: Ukwesekwa kwesaziso akuxhomekile ku-notify-osd, lelo phakheji nje ukuqaliswa okwenziwe yiCanonical.
Noma kunjalo, akudingekile noma kuphoqelekile noma kuphephile ukufaka okugciniwe kwangaphandle ukufaka nokusebenzisa i-yaourt. Vele ulande amafayela ambalwa, uvule ukuphela kuleso siqondisi bese usebenzisa: $ makepkg
Lokhu akuchazwanga futhi kugcina kuveza umsebenzisi ebungozini bezinqolobane zangaphandle kanye nokungafundi ukwakha iphakheji.
Ngingaqhubeka, kepha akunangqondo. Akugxeki ngokugxeka engikwenzayo, kepha ngiyaphinda ngithi ngaphezu kokungafuneki, imininingwane eminingi equkethwe kulo mhlahlandlela ayiphelele futhi ayinasidingo. Ngincoma kulabo abafuna ukusebenzisa i-Arch, ukuthi bafunde i-Wiki. Labo abangafuni ukufunda imininingwane engaka,
Ngicabanga ukuthi kungaba kuhle ukuthi "ukhulume" nomnikazi weposi futhi uma ucabanga ukuthi umnikelo wakho kufanele uthuthukiswe ukwenza lokho, noma wakhe okusha. I-blog kufanele ibambisane, hhayi ukwahlulela abanye.
Angizange ngahlulele muntu, angiqondi ukuthi iyiphi ingxenye yamazwana ami engatholwa. Ngokunjalo, ukuphawula kwangaphambilini kushicilelwe ngephutha ngenkathi kusakhiwa. Lapha empeleni ungafunda lokho ebengifuna ukukusho:
Ngiyabonga kakhulu ngalezi zifundo, zingisize kakhulu, konke kwenziwa lula kakhulu.
Ngokuqondene nemithombo oyifakile, ngingeza i-ttf-liberation eyinguqulo yamahhala ukufaka i-Arial ne-Times, futhi bengizosusa i-ttf-bitstream-vera, ngoba iDjavu iluhlobo lokuvuselelwa kwalokhu.
Ngikweluleka ngokuqinile ukumiswa kwenqwaba ye-Infinality:
Bengicabanga ukuthi inkululeko ye-ttf isivele ingeziwe, bese ngiyayishintsha.
Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana.
Ngishiya izibonelo ezimbalwa ukuze ubone ukuthi akusikho ukugxeka okungenangqondo:
I-1- notify-osd ayidingekile futhi kungukuqaliswa kweCanonical kuphela kwesaziso-daemon, iphakheji elidingwa kuphela yi-wammu.
I-2- yaourt ingafakwa ngaphandle kwesidingo sokungeza ama-repos angaphandle. Ngaphezu kokufihla kumsebenzisi ithuba lokufunda ukwakha iphakethe nge-makepkg, kubabeka engcupheni yokukhubazeka okungaba nakho okugcinwa ngaphandle.
3- Akudingi i-pamixer noma i-xbindkeys kumakhibhodi amaningi ukulawula okhiye bevolumu, kungukukhiqiza okungalungile.
Ngingaqhubeka, kepha akunangqondo. I-Arch akuyona i- "out of the box" distro, idinga isikhathi sakho nokuzinikela kwakho futhi indlela engcono kakhulu yokwazi ukuthi kungenxa ye-wiki yayo. Ukufuna ukweqa leso sisekelo solwazi esidingekayo ngomhlahlandlela osheshayo kuphambene nalokho okushiwo yi-distro:
Umbono we-Do-It-Yourself udinga ukuthi umsebenzisi azi ukuthi benzani. Akwanele ukuqhuba uchungechunge lwemiyalo ngaphandle kokuqala wazi ukuthi benzani noma ngabe kudingeka.
Sala kahle! »
Uxolo, lokhu kuthunyelwe ngephutha: https://blog.desdelinux.net/configuracion-basica-de-arch-linux/comment-page-1/#comment-113187
Sicela uyisuse. Ngiyabonga.
Okushoyo kubukeka kungithakazelisa kimi, kepha kulabo abasanda kuqala indlela elula yokwenza izinto ngokulingisa okwenziwe ngomunye umuntu futhi lapho ukukopela noma ukukopisha kusebenza kulula ukuthi baqonde okwenziwayo lapho behlangana isifundo sobuchwepheshe esithe xaxa futhi le ndlela ufunda ngayo.
Uma sibheka impilo uqobo lwethu, sikhule silingisa abadala bethu bese besichazela izinto, kuhle uma ukopishe okubi abakunike kona. Kepha siyakhula futhi sifunde ngokukopisha futhi umhlahlandlela omuhle kakhulu owenziwe ngumngani u-Alejandro uhlose ukukwenza lokho, sisize i-neophyte ukuthi ingene kwi-arch futhi ingamxoshi.
Okokuqala ngifuna ukukubonga ngokwabelana nenqubo yakho, kuyinto efanele ukuyenza inqobo nje uma inenhlonipho.
Manje maqondana nenqubo yakho:
1.- Yazisa-osd: Njengoba ushilo ukuqaliswa kwephakeji elishiwoyo, uma abasebenzisi befuna ukusebenzisa okujwayelekile (isaziso-daemon), ngezizathu ezisobala bazokwenza njalo, kepha akuyona inketho kuphela engiyishoyo, lowo msebenzisi uzithole unganelisekile futhi / noma ungangabazi kufanele wazi ukuthi kunezinketho eziningi kakhulu ongazisebenzisa.
2.- I-Yaourt: Kule ngxenye okushoyo kulungile, ukufakwa kwe-yaour kuzimele ezindaweni zokugcina izinto, noma kunjalo kuyindlela elula yokwenza (njengoba ngizochaza kamuva, inhloso enkulu yemihlahlandlela yami ukwenza kube lula), Kungani ngichitha isikhathi entweni engiholela entweni efanayo? Ngokuphathelene nobuthakathaka bokunikeza umsebenzisi indawo yokugcina yangaphandle, le ngxenye ngiyithatha ingenangqondo, ngiphawula ngobuthakathaka besibalo, esishiwo nesiphethwe ku-Arch Linux yiFrance (?), Kungaba nokuhlangana uma ukusho endaweni yokugcina umsebenzisi othile.
3.- I-Pamixer ne-Xbindkeys: Okushiwo ngala mapakeji amabili, umsebenzi we-Xbindkeys awudluli futhi ungaphansi kokunikeza izinqamuleli zekhibhodi yomsebenzisi (ezingashiywa uma kusetshenziswe imvelo elungiselelwe ngaphambilini, ngiyethemba ukuthi ufunde umhlahlandlela) nalowo kaPamixer (igama lakhe uqobo lisho njalo) umphelelisi wePulseaudio, umsebenzi wawo ukunikeza nokugcina isilawuli somsindo.
Uphawula ukuthi ukufakwa kwayo akudingekile, ngiyakumema ukuthi wenze isivivinyo endaweni enkulu (i-twm) etholakala ekusatshalalisweni okuningi, uma kukhona engizokushicilela kungenxa yokuthi sengikuqinisekisile.
Ngalokho okushoyo: "Umbono wokuthi" Zenzele ngokwakho "kudinga ukuthi umsebenzisi azi akwenzayo." Ngiyavuma ngokuphelele, okuyimpoqo, umsebenzisi kumele azi ukuthi wenzani ngohlelo lwakhe, futhi kungukungazi kwangempela ukuthi umsebenzisi owenza "umyalo" (njengoba ushilo), ngaphandle kokuqala abe nolwazi olunjalo.
Mayelana nokuphawula kwakho: «fihla kumsebenzisi ithuba lokufunda ukwakha ...» ngiyaxolisa kepha ngibona le ngxenye ukuthi uphawule ngokungazi okukhulu, i-Arch Linux iyisabelo esinconywayo sabasebenzisi abaphakathi / abaphambili, kusobala ngalokhu umsebenzisi kumele sebenolwazi olujwayelekile lwangaphambilini mayelana nohlelo, ukuthi umsebenzisi ofanayo angazivumelanisa nezinyathelo ngezidingo zabo ngokufaka esikhundleni / ngokushiya amathuluzi engiwashoyo, kepha ngiyabona ukuthi uphawule ngalokhu ngentshisekelo yokucasula. Kulesi sinyathelo angikwazi ukukhuluma ngokunikeza ubuso bebhulogi, noma kunjalo, uma ngibala abaphathi, ngifuna ukuphawula ukuthi inhloso yakho konke okufakiwe, okokufundisa, izindaba noma yini abathanda ukuyibiza njengamanje eshicilelwe ku-DesdeLinux, ukunikeza umsebenzisi idokhumende lezinhlelo kanye / noma izinqubo umsebenzi wazo oyinhloko oqinisekisiwe futhi ngaphezu kwakho konke okuhambisanayo. Ngalokhu ngiphawula kubo bonke abasebenzisi be-blog, ukuthi abayilandeli imininingwane ethulwa ku-DesdeLinux, uma okuthile kubonakala kuthakazelisa / kungabaza kuyisibopho sabo ukuxhumana nabezindaba abaningi noma umbhali, noma kunjalo, njengoba kushiwo ngaphambili, bonke izindatshana ezishicilelwe kuLinux ziyahlaziywa ngaphambi kokuba zishicilelwe, eziqondisa umsebenzisi kulwazi oluthile, oluqinisekisiwe noluphephile ngale ndaba.
Inhloso enkulu yemihlahlandlela yami eshicilelwe njengamanje ukunikeza umsebenzisi imibhalo efanelekile yezihloko ezishiwoyo, ukuguqula imininingwane ngendlela elula, ngingasho kucace, kubo bonke abasebenzisi futhi kungaqondakala ngendlela enengqondo futhi enengqondo.
Futhi, ngiyabonga ngokwabelana nenqubo yakho, ngiyaluthanda lolu hlobo lwamazwana, ngoba kuwo sibona amaphutha ethu (uma akhona) futhi sifunda kuwo.
Ukubingelela okuvela eMexico.
Sawubona, kusobala ukuthi ngeke sifinyelele ekuqondeni mayelana nokuba wusizo noma cha komhlahlandlela, kungumbono wokuzithoba. Ngisekela okwami ​​eqinisweni lokuthi i-Arch akuyona eyabo bonke abantu futhi uma kunjalo, kuzodinga ukuthi umsebenzisi we-novice aqeqeshe ngokubhanka i-wiki (eyisicefe noma cha) ukuze ihambisane nalokho abahlose ukukusebenzisa.
Angikwazi ukuhlukanisa ukuthi umsebenzi wakho uhlanganiswe nomqondo wezinkomba ezidumile "Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka Ubuntu XX.XX" futhi ngikholelwa ukuthi indlela enjalo ayifanelekile kusuka ku-Arch.
Isib Njalo umshayeli unemibono emincane ngomakhenikha ukuze akwazi ukusebenzisa imoto futhi akubona bonke abacelwa ukuthi baqonde izinto ezithile njengokusebenza komehluko. Manje uma uhlose ukushayela imoto yakwaNascar, kufanele ube nesisekelo esibanzi futhi esiqinile.
Ngakolunye uhlangothi, isizinda se-archlinux.fr asisemthethweni futhi futhi akushiwo ukuthi yi-repo. Banemvume yokusebenzisa igama kuphela. Uma kusasa othile eguqula ngenhloso iphakethe le-repo eshiwo, ukuba nenketho ethi "SigLevel = Ungalokothi" kuzogcina sekufaka into embi.
Yilapho ukugxeka kwami ​​okukhulu kuvela khona, izingozi azichazwa, noma isizathu salolu khetho.
Angibhali ngenhloso yokucasula, ngibamba iqhaza kwizithangami eziningi futhi ukunyathela into yokugcina engithandayo. Lapho ngithi kungenzeka ukuthi ukufunda kufihliwe kumsebenzisi ngiqonde ukukusho ngesizathu:
Indlela ka-Arch akuyona yokwenza izinto zibe lula, kodwa zilula. Ukulanda amafayela amabili we-PKGBUILD nge-wget, ukusebenzisa i-makepkg bese kuba yi-Sudo pacman -U iphakethe, kufundisa ukuthi ungakha kanjani iphakethe bese ulifaka endaweni yangakini.
Ngokusishaya indiva lesi sinyathelo esibalulekile, umsebenzisi we-guide akayifundisi nje kuphela, kepha njengoba sengishilo, ugcina ngokubeka engcupheni ukuphepha kohlelo lwakhe engazi.
Ngiyaxolisa kulabo ababona ukuthi ukuphawula kwami ​​kokuqala kwakweyisa, lokho kwakungeyona inhloso yami. Sala kahle! »
Okokuqala, le mihlahlandlela ngokusobala ayidluli i-Arch wiki (futhi angizami ukwenza kanjalo), kepha-ke le mihlahlandlela "elula" eyokuqondisa abasebenzisi abafuna ukuba nolwazi oluthe xaxa ngeGnu / Linux, ngoba i-Arch Linux ilula impela futhi ufunda okuningi naye.
Ekuqaleni ukhuluma ukuthi i-Arch akuyona eyabasebenzisi abasha / abaphakathi, bese ukhuluma ngolwazi oluncane umsebenzisi okufanele abe nalo ku-Arch (ukufakwa kwamaphakeji).
Ngokusebenzisa okugcinwa esikhundleni sokwenza ngesandla, uthola izinzuzo nezinkinga (okuyizinto ezingenangqondo futhi ezisobala).
Okunye ukungalungi kokusebenzisa i-repo ukuthi inani lamaphakeji liyindlala kakhulu, njengoba iningi lisesimweni esiphelelwe yisikhathi, yize lokhu kungisindisa ukufakwa kwamathuluzi (wget, yize ngingawathola amaphakheji ngezinye izindlela).
Uyasho: "Indlela ka-Arch akuyona yokwenza izinto zibe lula, kodwa zilula ...". Okwakho, yikuphi okulula "okulula"? (kusobala ukuthi isebenza ngemodi yombhalo):
1.- Faka ikhosombe, uvuselele amakhosombe bese ufaka iphakheji.
# pacman -Syourt
2.- Sebenzisa izindlela ezithile, decompress iphakethe, iya kukheli lapho iphakethe litholakala khona bese wenza i- $ makepkg -si.
Imiyalo: 10 (kungabalwa imiyalo yokufaka ithuluzi ukuthola amaphakheji, noma ukufaka i- "&&" edumile.
$ curl -O https://aur.archlinux.org/packages/pa/package-query/package-query.tar.gz
$ tar zxvf package-query.tar.gz
$ cd umbuzo-wephakheji
$ curl -O https://aur.archlinux.org/packages/ya/yaourt/yaourt.tar.gz
$ cd yeourt
Noma kunjalo lezi zinkinga, ake sithi, akunangqondo ukusho, ukufakwa kwephakheji le- "X" nge-repository noma ngesandla.
Ngaphezu kwalokho, umsebenzisi angasusa indawo yokugcina ngemuva kokufaka iphakheji ye-Yaourt kanye / noma enye ayithandayo, ngaphandle kwenkinga.
Akungenxa yokuthi kubonakala kungukuzenzisa, njengoba ngicabanga okufanayo nawe, i-Arch Linux uhlelo lapho udinga ukuba nolwazi lwangaphambilini ukufaka nokusebenzisa uhlelo, futhi yize kuzwakala sengathi kuyingane, kukhunjulwa uMalume uBen: «Kuhle amandla eza nomsebenzi omkhulu ”futhi ngaphezu kwakho konke ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani.
ILanga Nokuthula kusho
Udlala isilima? Lo mhlahlandlela ungukungena kokwazi i-Arch Linux, ukwazi ukuthi kukhona okuthile "okuningi", akusho ukuthi yilona lonke ulwazi oludingekayo ukuphatha i-Arch Linux 100% (ngaphandle kwalowo "olungile"), kodwa ukukhombisa abasebenzisi bokunye ukwabiwa (futhi mhlawumbe nabantu abasha abafuna imininingwane ngeLinux) ngobukhona nokuthi i-Arch Linux isebenza kanjani ngokungakhathali. Futhi lokho okukhombisa ukukwenza kulezi zinkombandlela kuqondiswe ukukwenza kukhompyutha YOKUHLOLA noma kumshini obonakalayo ... Vele ufunde inkomba yokuqala lapho ixwayisa khona ukuthi idiski izohlanzwa.
Phendula uLanga Nokuthula
Le, iPoringa bukhoma, haha, ngaphandle kwalokho ngiyakuthanda okuthunyelwe, yize abaningi bekugxeka, kukhonjisiwe ukuthi abasebenzisi be-novice bahlala beqala ngokuthunyelwe okunjengale esikhundleni sokuya ngqo ku-wiki, njengoba bencoma, ngemuva kokuba nesisekelo uma finyelela kulezi.
Usuku owenza ngalo »Faka i-Pantheon ku-Arch Linux.» Ngizokwenzela isikhumbuzo.
Sobabili 😀 Ngiyasixhasa isiphakamiso
I-Pantheon ku-Arch Linux:
Ngiyethemba ukuthi bayayithobela i-hahaha, umhlahlandlela uyathuthukiswa.
Ngiyakuthanda lokhu okuthunyelwe, ngiyayithanda i-archlinux iyintandokazi yami ngemuva kokuzama konke. Futhi ngokuningiliziwe futhi uchaze ukuthi lokhu kwenzeka kanjani, ufunda izinto eziningi.
Ngingasho nje, ngiyabonga kakhulu.
Sawubona. Okokuqala, ngiyakuhalalisela kumhlahlandlela nawo wonke umzamo owenzile wokuwenza.
Ngifake i-arch elandela lo mhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo futhi cishe yonke into ibinokunethezeka, ngaphandle kwenkinga futhi ihambisa izinyathelo ezinzima kakhulu kwi-wiki esemthethweni.
Kepha ngithanda ukwenza iphuzu:
Ekuqaleni ngangilandela umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo kepha ngaba nenkinga yokuxhuma ku-inthanethi ngemuva kokuqalisa kabusha i-pc lapho uhlelo selufakiwe. Lapho-ke bengiqhathanisa umhlahlandlela wakho newiki futhi ngabona ukuthi umhlahlandlela wakho awusho nganoma yisiphi isikhathi ukuthi silanda iphakethe lengxoxo elisetshenziselwa imenyu ye-wifi ne-tpco iphakethe le-iw. Ngaphandle kwalawo mapakeji bekungenakwenzeka ukuthi ngikwazi ukuxhuma kwi-inthanethi ngakho-ke angikwazi ukwenza i-pacman ukuvuselela noma ukufaka i-xorg noma yini. Ngibe sengilandela umhlahlandlela wakho kepha ngaphambi kokuqalisa kabusha ngafaka lawo mapakeji njengoba i-wiki isho futhi angibange ngisaba nezinkinga. Angazi noma ngabe ukhohliwe ukubakhuluma noma ngabe kunesinyathelo esiphakathi engisiphuthelwe. Konke okunye, ngiyabonga ngomzamo wokwenza lula kwabasebenzisi be-novice njengami. Ukubingelela.
Kuya ngekhompyutha, ngilandele i-wiki, kepha benginezinkinga ezithile, ikakhulukazi nge-inthanethi, ngoba bengikwazi ukusebenzisa imenyu ye-wifi, kepha umphathi wenethiwekhi akazange, esikhundleni salokho ngenze into kulo mhlahlandlela, ngafaka ngqo umphathi wenethiwekhi, cha Nginike amandla noma ngakhubaza noma yini njengoba i-wiki isho, futhi umphathi wenethiwekhi ne-wifi bangisebenzele
Umngane weSpanish (Latin America) yi-latam not la-latin1
Uhlu lungabonakala lapha /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst
Sanibonani, ngiyabonga ngomnikelo 🙂
Ngiyabonga kakhulu, kungisizile kakhulu !!!
Umhlahlandlela omangalisayo !! Siyabonga ngokwabelana ngakho, kuhle, lokhu nayo yonke imihlahlandlela yakho ku-Arch.
Sawubona, ngiyabonga ngesiqondisi, iqiniso ukuthi lingisize kakhulu, ikakhulukazi le ngxenye, angazi ukuthi bekudingeka ngempela yini ukuyenza, kepha lolu lwazi luhlukaniswe kakhulu kwi-wiki, ngakho-ke kuhle konke kukodwa.
Umhlahlandlela oyisisekelo owubekile nawo ungisizile, empeleni, ngenza izinguquko ezincane ozibeka maqondana ne-wiki enkulu, ngithole uhlelo oluphelele, umphathi wenethiwekhi ubongwa kakhulu, kubonakala ukuthi kufanele ufake lokho one bese ukhohlwa ezinye izinketho, ngoba zakha ukungahambelani, okungenani kwenzeke kimi ukuthi bengingasebenzisa imenyu ye-wifi kuphela.
Ukubingelela nokuhalalisela ngalezi zifundo ezinhle ezisenza sikhuthazeke ngokwengeziwe ukungena kulo mphakathi omuhle kakhulu weSoftware yamahhala futhi sishiye ngemuva iSoftware ephathelene.
Ngemuva kwalokho bengifuna ukukutshela ukuthi ngilandela konke okokufundisa kokufakwa kwe-Archilinux kepha i-kde ayizange ilunge nhlobo, i-mozilla ibonakala kimi ingenamphumela, imbi kakhulu, konke okunye kuhle, ngilwa nje kancane ne Ulimi lweSpanishi Ngoba yonke into ayihunyushelwe mina, iMozilla iseseNgilandi futhi imenyu yokuqukethwe yenkinobho yesokudla nayo iyavela ngesiNgisi uma unomusa kangaka ukwazi ukungisiza, ngingakuthokozela kakhulu.
Ngemuva kokufakwa kwe-yaourt -S pamixer-git, ngigxumela ku-terminal lokhu: Iphakethe elingasekelwa: Okungaba yingozi okuhunyushwe yilokhu: Iphakethe elingasekelwa: Okungaba yingozi, okungaba: ((, ngiyabonga ngakho konke futhi uma unomusa ongisizayo, ngingajabula, imikhonzo futhi sizokubona maduzane.
Ucezu lomhlahlandlela, ngilufekethisile, futhi ngalandela konke okuya encwadini futhi ngiphelele, ngiyabonga nethimba lonke lale Blog, ngoba ngenxa yakho, iningi lethu liyakhuthazwa ukuthi lisebenze nge-software mahhala, imikhonzo kubo bonke futhi siyabahalalisela ngalo msebenzi omuhle kangaka.
Umbuzo owodwa uma ungakhulumi kakhulu, umayelana nevolumu yomsindo, kufanele ngiyilungiselele kanjani ukuze njalo lapho ngiqala iseshini akudingeki ngiyilayishe ngoba ihlala phansi futhi njalo lapho ngiqala isikhathi kufanele ngisiphakamise, futhi yini umyalo wokukwazi ukubona i-applet yomsindo, ukubonga nokubingelela.
Ngidinga isinyathelo esisodwa kuphela, ukumisa i-Xorg, ungawuthola umhlahlandlela? Ngiyabonga!!!
Ngibonga isifundo kodwa nginezingqinamba ezi-2
1.-Kulesi sifundo sokucushwa okuyisisekelo, lapho ngiqeda futhi ngiqala kabusha ngithayipha i-startx futhi ayingivumeli ukuthi ngifake imodi yokuqhafaza, «Imibiko ye-XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp):> isixwayiso: thayipha i-one_level inamazinga ayi-1, kodwa inezimpawu ezi-2 ukungazinaki izimpawu ezingeziwe. Amaphutha avela ku-xkbcomp awabulali ku-x xitit ye-x: uxhumano x iseva elahlekile ilinde i-x server ukuvalwa (EE) Iseva inqanyulwe ngempumelelo (0). Kuvalwa ifayela lokungena. »
2.-Angikwazi ukuqala amawindi, ayikho ku-grub
kahle ngasithola isixazululo
Umhlahlandlela Omuhle Kakhulu.
Angazi ukuthi bangangisiza yini, angikwazi ukufaka i-Yaourt, ngithola iphutha elilandelayo lapho ngisebenzisa umyalo Sudo pacman -S yaourt
Iphakethe lephutha alinaso isiginesha edingekayo
file / var / cache / pacman / pkg / package-query-1.4-1x86_64.pkg.tar.tz yonakele (iphakethe elingalungile noma elonakele)
U-Eduardo David Paredes Vara kusho
Ukhohlwe i-bluetooth kulabo bethu abasebenzisa i-laptop (Noma ngokujwayelekile, ngicabanga).
Faka i-bluez ne-bluez-utils
Layisha umshayeli ojwayelekile.
Qala insiza bese uyenza ukuthi iqale ebhuthini
~ $ sudo systemctl qala i-bluetooth
~ $ sudo systemctl vumela i-bluetooth
Okulandelayo angazi uma kunesidingo, kepha ngiyakuvulela futhi anginankinga:
Dala ifayela ku /etc/modules-load.d ngegama bluetooth.conf bese ufaka "btusb" kuyo * Qalisa okulandelayo njengezimpande *
Bese ufaka i-Front-end ngokuya ngesixhumi esibonakalayo sakho
Phendula u-Eduardo David Paredes Vara
U-Alberto Rodriguez kusho
Okokuqala, isifundo esihle kakhulu osinikeza sona, iqiniso ukuthi bengikade ngingumsebenzisi we-Gnu / Linux isikhathi eside kepha bengingumthandi wama-distros asuselwa ku-Debian manje njengoba sengishintshele ku-Arch I am ngeke ngiyikhiphe isikhashana (ngiyithande kakhulu le distro). Manje umbuzo wami, ingabe ikhona indlela yokulondoloza ushintsho lokukhanya nevolumu? ngoba njalo lapho ngiqala phansi kunginika konke ukukhanya nokuvolumu
Phendula u-Alberto Rodriguez
Sawubona Linuxeros, nginezingqinamba ezintathu:
1.- Lapho ngiqala okokusebenza futhi ngilayisha imvelo yokuqhafaza, ngifaka umsebenzisi ngiphase, ngithola umyalezo olandelayo «Ukwehluleka ukusebenzisa umyalo wokungena ngemvume».
2.- Lo myalo awusebenzi kimi $ cp /etc/skel/.xinitrc ~.
3.- $ sudo pacman -S yaourt, angikwazi ukuyifaka, iphutha: i-target ayitholakalanga: i-yaourt
Konke okunye ngaphandle kwezinkinga, ngiyabonga.
Ngiyixazulule ukusuka lapha, imikhonzo.
Sawubona, sawubona, sithandwa sami!
Nginenkinga engangivumeli ukuthi ngiqede ukumiswa okuyisisekelo kwe-Archi
ENGEZA IZIKHUNGO ZESEKHONDARI
futhi njengoba lokhu kungezwa ngesandla kanye ne- [archlinuxfr]
SigLevel = Akukaze
Iseva = http://repo.archlinux.fr/$arch
kepha lapho wenza umyalo: $ sudo pacman -Sy
Ngithola iphutha: angikwazanga ukuthola ifayela < >
Ungangisiza ngale nkinga? Ngimusha ekufakeni umlando futhi angazi ukuthi ngililungisa kanjani leli phutha.
Inkinga yakho ikulungiselelo lwe-
Bheka ukuthi ubhale kahle yini.
Ngiyacela, ngingakuthokozela ukufaka izithombe zosizo njengoba wenza ekufakweni, angikwazi ukufaka i-arch linux ngokuphelele, futhi ngihlala lapha 🙁
sawubona ngilandele umhlahlandlela wakho amahlandla ambalwa nakho konke okuhle, (iphutha le-virtualbox) bengifuna ukusho nje ukuthi ubungekho abashayeli bomsindo.
yilungise nge-pacman -S pulseaudio
ngiyabonga ngomnikelo futhi ngiyaxolisa ngokungalungile
Ngingathanda ukwazi ukuthi i-LXQT izofakwa kanjani
UGabriel Cervantes kusho
Sawubona, unjani? Umbuzo owodwa, uma ingekho i-yogurt eyayiyikhosombe elihle kakhulu lamaphakeji ahlukahlukene. Usebenzisa ini?!, Ngingathanda ukwazi umbono wakho nokuthi uwafaka kanjani,
Ngale ndlela, izindatshana ezinhle kakhulu, bengilokhu ngibonisana nazo iminyaka eminingana manje njengoba ngisebenzisa i-ArchLinux
Phendula uGabriel Cervantes
Ukudlala ngeGimp: Ukwakha Ibhomu Elimnandi
I-Peerflix noma ukusakaza kanjani imifudlana